‘प्रचण्ड–चिल’ले सत्ताकब्जाको सपना नदेखेकै राम्रो :: हरदम कोइराला – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२१ असार २०७७, आईतवार २३:४० English
‘प्रचण्ड–चिल’ले सत्ताकब्जाको सपना नदेखेकै राम्रो :: हरदम कोइराला
हालै ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा सम्पन्न एमाओवादीको विस्तारित बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्ति निकै चर्चामा रह्यो । जिम्मेवारीले नेताको, आकारले मानिसको र प्रकारले हिंसात्मक जनावरको व्यवहार गर्ने प्रचण्डले आफू चिल (पंक्षी) भएको दाबी गरे । प्रचण्डको छवि एक जाली–झेलीका रूपमा स्थापित भए पनि उनी बेलाबखत मनका कुरा खुलस्त राख्ने पनि गर्छन् । विस्तारित बैठकमा आफ््ना कार्यकर्तामाझ पचासौँ झुटबीच एउटा सत्य बोल्दै आफूहरू चिलझैं निशाना लगाउन सचेत रहेको प्रचण्डले संकेत गरे । पंक्षीहरूमा चिललाई आकर्षक, चतुर र बलियो मांसाहारीका रूपमा लिइन्छ । जनावरमा सिंह, बाघ या चितुवाले पाउने ‘मान सम्मान’ पंक्षी जगत्मा चिललाई प्राप्त छ । शिकार गर्ने र मासु खाने भए पनि हुँडार, स्याल र ब्वाँसो तिनका रूपरङ्ग र शैलीका कारण अपहेलित छन् । पंक्षीहरूको संसारमा चाहिँ सम्भवत: गिद्धलाई तिरष्कृत मानिन्छ । तर, जनावर या पंक्षीप्रतिको यस्तो दृष्टिकोण तिनको चरित्र, स्वभाव, शैली र रूप हेरेर हामी मानिसले बनाएका हौँ । आफ्नो संसारभित्र तिनको छवि हामीले देखेको या बनाएकोभन्दा भिन्न हुनसक्छ । मांसाहारी र आकर्षणविहीन भए पनि गिद्धलाई चिलभन्दा कैयन गुणा योग्य र उपयोगी मान्न सकिन्छ । गिद्ध, जसले मासु खाए पनि कसैको हत्या गर्दैन, लुटेर–खोसेर खाँदैन, मिति पुगेर या नपुगीकन मरेका या मारिएका जीवजन्तुको मासु खाएर उसले आफनो जीवन निर्वाह गर्ने गर्दछ । उसले आफनो जीवन निर्वाह गरिरहँदा प्रदूषणमुक्त तुल्याउन योगदान पुर्‍याएकोले गिद्धको भूमिका सम्मानजनक नभए पनि उसको उपयोगिता बोध गर्न सकिन्छ ।
तर चिलको कुरा बेग्लै छ, ऊ शान्तपूर्वक आफ्ना गुँडमा बसिरहेको वा चरिरहेका परेवा र त्यस्तै आकारप्रकारका पंक्षीहरूलाई आक्रमण गर्छ र भोक मेटाउँछ । पखेटा नलागेका आफ्ना बचेराहरूलाई आहारा खोज्न निस्केका चराचुरुङ्गीलाई बाटैमा शिकार गरेर चिलले वास्तवमै कति ठूलो आपराधिक र दानवीय कार्य गरेको छ भन्दा पनि उसले कति मज्जाले शिकार–कौशल प्रस्तुत गर्छ भन्ने पक्षलाई आधार बनाएर हामी चिलप्रति आकर्षित हुने गर्दछौँ । तर, प्रकृतिको शोभा बढाउँदै बथानमा उडिरहेका या जमिनमा चरिरहेका निहत्था पंक्षीहरूलाई आफ्नो शिकार बनाउने चिलभन्दा कैयन गुण बढी गुणी पंक्षीका रूपमा गिद्धलाई लिइनु उपयुक्त हुनसक्छ । प्रचण्डले आफूहरूलाई त्यसप्रकारको गुणी पंक्षी गिद्धसँग तुलना गर्नुभन्दा सिधासादालाई शिकार बनाउने चिलसँग जोड्नुमा गौरव महसुस गरे । अब प्रश्न उठेको छ– प्रचण्ड चिल भए परेवाचाहिँ को ?
प्रचण्डहरूको गन्तव्य ‘सम्पूर्ण सत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण’ हो भन्ने तथ्य सबैमा जाहेर छ । उनीहरू अन्य सबैलाई अलमल्याउँदै र भुलभुलैयामा राख्दै सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्न चाहन्छन् भन्ने पनि सबैले बुझेको सत्य हो । शान्तिपूर्वक आ–आफ्नै संसारमा रमाइरहेका अन्य राजनीतिक विचारवाहकहरूले सुइँकोसमेत नपाउने गरी सत्तामाथि आफ्नो एकलौटी नियन्त्रण बनाउन प्रचण्डहरू क्रियाशील रहेको जानकारी पनि सबैले पाएका छन् । काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षी विचारप्रति प्रतिबद्ध सामान्य नेपालीमध्ये करिब १७ हजारको गला रेट्दा पनि सत्ता प्राप्तिको सपना पूरा नभएपछि कथित सम्झौताको मार्ग अवलम्बन गरेका प्रचण्डहरू रोल्पा–रुकुमबाट नयाँदिल्ली र दिल्लीबाट काठमाडौं सिंहदरबारसम्मको यात्रा पूरा गरिसक्दा पनि एकलौटी सत्ता प्राप्तिको खहरे सोचबाट मुक्त भइनसकेको महसुस आमनेपाली जनताले गरेका छन् । शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि एकलौटी सत्ताप्रति दर्शाएको मोहले एमाओवादी नेतृत्व छट्टु स्याल या चिलझैं शिकार प्राप्तिको रणनीतिक चालबाजीमा रहेको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ । विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नै प्रकारका भूमिकामा रमाइरहेको मौका छोपेर चिलले चल्ला टिपेझैं सत्ता टप्काउने जुन रणनीतिक चालबाजी प्रचण्डले चलिरहेका छन् त्यसप्रति आमनेपाली र विश्व समुदाय सचेत नरहेको ठान्नु प्रचण्डको महाभूल हुनसक्छ । सबैलाई छलेर सत्ताको मालिक बन्ने प्रचण्डको सपना अन्तत: सातुको घ्याम्पोमा लात्ती हान्ने कथाका पात्रझैं भताभुङ्ग हुनेमा द्विविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति अब छैन । फरक विचारसमूहका निहत्था समर्थकको गला रेटेर ‘सफलता’ प्राप्त गर्ने अध्याय त केहीअघि नै समाप्त भइसकेको छ, अब सबको आँखा छलेर सत्ता टिप्ने स्थिति पनि छँदै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले आफू चिल भूमिकामा रहेको उद्घोष गरेर देश र जनतालाई थप सचेत मात्र बनाइदिएनन्, आफू मानव भूमिकामा रूपान्तरित हुन अझै बाँकी रहेको खुलासासमेत गरिदिए । विगत कैयन वर्षदेखि प्रचण्डहरूलाई ‘मानव बनाउन’ राज्यबाट भएका प्रयासहरू निरर्थक रहेको तथ्य पनि यस प्रकरणले उजागर गरेको छ । चिल बनेर आकाशमा जति फन्को लगाए पनि अब धर्तीमा कुनै परेवा तिनको आहार बन्न तयार छैनन्, न राज्यसत्तालाई टपक्क टिपेर लैजाने स्थिति नै छ । त्यसैले यति भन्न सकिन्छ– ‘चिल रहेछन् प्रचण्ड, आकाशमा घुमिरहे हुन्छ, धर्तीमा बिर्को लागिसकेको छ, सत्ताकब्जाको सपना देख्दै नदेख्नु राम्रो ।
११ श्रावण २०७०, शुक्रबार ०९:३५ मा प्रकाशित
मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची आयोजनाको दन्त्यकथा सकियो’	२१ असार २०७७, आईतवार १७:३२
आइतबार कोरोनाका २९३ संक्रमित थपिए	२१ असार २०७७, आईतवार १६:२७
कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनबाटै सर्टिफिकेट दिईने	२१ असार २०७७, आईतवार १२:४३
कोरोनाले विदेशमा १४३ नेपालीको मृत्यु, यो साता मात्रै १३ नेपालीले ज्यान गुमाए	२१ असार २०७७, आईतवार ०९:०९
देशभर वर्षाको सम्भावना	२१ असार २०७७, आईतवार ०८:५७
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा अवरोध, प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार	२० असार २०७७, शनिबार १८:०५
केन्द्रीय सदस्यले सभापति देउवासँग मागे प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे जवाफ
२१ असार २०७७, आईतवार १७:३७
मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची आयोजनाको दन्त्यकथा सकियो’
२१ असार २०७७, आईतवार १७:३२
आइतबार कोरोनाका २९३ संक्रमित थपिए
२१ असार २०७७, आईतवार १६:२७
दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल
काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास..
काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..
उमा थापाको शनिवारिय कोशेली, कथा: ‘देउता आएनन्’
काठमाडौँको माघ महिनाको मुटु नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो त्यसमाथि केही दिनदेखि एकनासले झरी परिरहेको छ । शीतल बेलुकीको..
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबार सम्मका लागि स्थगित
काठमाडौँ, २० असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक असार २२ गते सम्मका लागि..
शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ?
काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ ।..